Uv Sterilizer SunWaves bụ sterilizer nwere ike iwepụ nje, ebu, nje bacteria na nje n'ime naanị 8 sekọnd. Ezubere imebi ibu nje dị n'elu dị ka iko kọfị ma ọ bụ saucers. Emepụtara SunWaves n'obi ọnọdụ COVID-19 afọ, iji nyere gị aka ịnụ ụtọ mmegharị ahụ dị ka ị drinkụ tii na cafe n'enweghị nsogbu. Enwere ike iji ya ma na ndị ọkachamara na gburugburu ebe obibi n'ihi na site na mmegharị dị mfe ọ na-eme ka ọ pụta ìhè n'ime obere oge site na ọkụ UV-C nke nwere ogologo ndụ na obere nlekọta, na-enyekwa aka belata ihe ndị a na-atụfu ihe.
Akụrụngwa Na Nkuzi
Akụrụngwa Na Nkuzi Manlọ ọrụ mandala bụ ngwa ọrụ ohuru na nkuzi. O bu ihe ohuru na ihe puru iche nke usoro iwu mandala oge ochie na njirimara ndi mmadu mere iji bulie onu ahia ya na mmezu ahia ya. Ọzọkwa ọ bụ ihe ọhụrụ nke njirimara ụlọ ọrụ. Manlọ ọrụ mandala bụ ọrụ otu maka otu ma ọ bụ ihe omume maka onye njikwa. Emebere ya maka ụlọ ọrụ dị iche iche na ndị otu ma ọ bụ otu na-achagharị ya n'ụzọ nwere ọgụgụ isi ebe mmadụ niile nwere ike họrọ agba ma ọ bụ n'ọhịa ọ bụla.
Onye Na-Ahụ Maka Ntụpọ Ultrasonic Nwere Ntụpọ
Onye Na-Ahụ Maka Ntụpọ Ultrasonic Nwere Ntụpọ E mere Prisma maka nnwale ihe na-abụghị nke mmụọ na mpaghara ndị kachasị njọ. Ọ bụ ihe nchọpụta izizi jikọtara ihe osise dị elu na nyocha 3D, na-eme ịkọwa ntụpọ ka ọ dị mfe, na -ebelata oge ọkachamara na saịtị. N'ihe na-enweghị ihe mgbochi na-enweghị mgbagha na ụdị nyocha nyocha pụrụ iche, Prisma nwere ike kpuchie ngwa nyocha niile, site na pip pip mmanụ na ngwa ikuku. Ọ bụ onye nchọpụta mbụ nwere ndekọ data na ntinye, yana ọgbọ ịkọ akụkọ PDF na akpaghị aka. Njikọ ikuku na Ethernet na-ekwe ka nkwalite ma ọ bụ chọpụtapụta ngwa ahụ.
Piano Ngwakọ Okpokoro Ile Ọbịa Uv Sterilizer Mmemme Nke Ihe Omume Akụrụngwa Na Nkuzi Onye Na-Ahụ Maka Ntụpọ Ultrasonic Nwere Ntụpọ